प्रचण्डले जवाफ दिनै पर्ने ओलीका तीनवटा प्रश्नः जनयुद्धका घाइतेको उपचारदेखि सम्पति छानविनसम्म — onlinedabali.com
प्रचण्डले जवाफ दिनै पर्ने ओलीका तीनवटा प्रश्नः जनयुद्धका घाइतेको उपचारदेखि सम्पति छानविनसम्म
डबली संवाददाता२०७७ मंसिर १५ गते
काठमाडौं । सत्तारुढ (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक भोलि बस्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावको अध्ययनको लागि भन्दै बैठक तीनदिन स्थगित गरिएको थियो ।
ओलीको प्रतिवेदन पढेपछि आम रुपमा आफ्नै नेतृत्वमा भएको जनयुद्धका घाइतेका शरीरबाट गोली र छर्रा निकाल्न प्रचण्ड तयार नभएकै हुन् त ? आन्दोलनमा योगदान गरेकालाई पाखा लगाउँदै दलाललाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेकै हुन् ? के व्यक्तिगत सम्पति छानविनको लागि प्रचण्ड तयार छैनन् ? प्रचण्डमाथि प्रश्न उठेका छन् ।
यति गम्भीर प्रश्नको उत्तर प्रचण्डले कसरी दिन्छन् हेर्न बाँकी छ । भोलि सचिवालय बैठक पार्टी कार्यालयमा पुनः बस्दैछ ।